Ahoana ny fanovana ny borosiko avy amin'ny .TPL ho .ABR ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Raha misintona mahafinaritra fotsiny isika borosy ary ny nahagaga anay dia tsy araka ny antenaina ny endriny. ary tianay ho fantatra ny fomba ahafahantsika manafatra an'ity endrika ity amin'ny Photoshop sy ny fomba hanovanay azy io ho .abr, hanazava izany aminao eto ambany izahay.
Ny manafatra ny borosinay amin'ny endrika .TPL amin'ny Adobe Photoshop, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ataovy ao anaty fampirimana ny fonosantsika borosy, tafasaraka amin'ireo rakitra hafa Na azontsika atao ny mamonjy azy ireo ao anaty fampirimana programa raha toa mety kokoa amintsika rehefa manapa-kevitra ny hikaroka azy ireo amin'ny ho avy isika, hanao an'io kopia io ary hametahana ireo fisie aminay amin'ireto lalana manaraka ireto:
Program Files> Adobe> Adobe Photoshop (ilay anananao)> Preset
Avy eo dia manokatra ny Adobe Photoshop izahay ary mankany amin'ny kiheba Amboary> preset> Exet / import preset.
Tsindrio eto ary hisokatra ny varavarankely toa ilay hitantsika amin'ny sary. Tsindrio eo amin'ny kiheba > fanafarana preset.
Avy eo dia mandeha amin'ny zoro ambany havia izahay ary tsindrio > safidio ny fampirimana manafatra, hisokatra ny varavarankely vaovao izay tsy maintsy hitadiavantsika ny fampirimana izay misy ny borosintsika amin'ny endrika tpl.
Raha vantany vao mifidy azy isika dia hiseho izy io, toy ny hita amin'ny sary, amin'ny faritra havia. Raha manana iray fotsiny isika, toa ahy, manindry isika > ampio daholo na mifidy ilay rakitra izahay ary tsindrio ny zana-tsipika afovoany manondro ny ankavanana mba hamindra ny napetraka amin'ny faritra mety. Raha manana maromaro isika ary tsy te hanampy azy rehetra, dia tsy maintsy mifidy izay tadiavintsika isika ary tsindrio ilay zana-tsipika afovoany izay manondro ny ankavanana.
Rehefa efa nanampy azy ireo isika dia tsindrio > fanafarana preset.
Tsy maintsy manao izany isika izao akaiky Photoshop ary sokafy indray izy mba hampidirana ireo rakitra nafarana.
Mandeha amin'ny vakizoro isika izao > Window ary izahay mitady > fitaovana efa voatendry ary tsindrio io safidy io. Hisokatra avy eo ny tontonana fitaovana efa niorina.
Raha te hahita ireo borosintsika amin'ny tontonana fampitaovana efa napetraka dia ilaina ny fananantsika ilay fitaovana borosy miasa. Azontsika atao ny manova ny borosy napetraka ao amin'ny fitaovana efa voatendry na manampy andiana maromaro kokoa amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny zoro havanana ambony an'ny Tontonana fitaovana efa voafantina ary fisafidianana ireo fonosana borosy izay tianay ampiana.
Azontsika atao ny mampiasa ny borosintsika amin'ny endrika .tpl, fa raha te hanana ny borosintsika amin'ny tontonana borosy isika, izany hoe, toy ny .abr, dia tsy maintsy manaraka ny dingana voalaza etsy ambany.
Ahoana ny fomba hanovana TPL ho borosy ABR
Hamafana ny borosy rehetra ananantsika ao amin'ny tontonana borosinay (.abr) izahay, raha tsy te-hanatevin-daharana ireo borosy vaovao amin'ny fonosana borosy hafa. Saingy, raha ny tadiavintsika dia ny manana fonosana borosy mitovy.tpl amin'ny .abr, ny zavatra tsara indrindra dia esory ny borosy rehetra amin'ny tontonana borosy ary manomboka ampio ny borosy amin'ny format .tpl tsirairay avy izay ananantsika ao amin'ny tontonana fitaovana efa voatendry.
Manafoana ny fikandrana borosy izahay hamoronana fonosana vaovao.
Mba hanaovana izany, mankany amin'ny tontonana> fitaovana efa voatendry ary miaraka amin'ny fitaovana borosy mavitrika, mifidy ny borosy voalohany izahay.
Izao dia tsindrio ny tontonana> borosy (Raha tsy ananantsika misokatra izy io, manokatra azy dia mankany amin'ny> Window> borosy ary manisy marika azy) dia mankamin'ny zoro havanana ambony isika ary tsindrio ny kisary safidy bebe kokoa ary ao amin'ny menio manokatra dia manamarika izahay> lanjan-tsavily vaovao. Misokatra ny varavarankely izay ahafahantsika manome anarana ny borosy raha maniry ary manindry isika > OK.
Amin'izany fomba izany no ananantsika Vao avy nanova ny borosinay.tpl ho format .abr izahay. Na dia manana borosy ampy aza isika dia mila fotoana fohy vao mandalo azy rehetra, io dia fomba iray hampiasana ny fonosana .tpl ao anaty .abr.
Raha vantany vao navadika ho .abr daholo ny borosy rehetra dia afaka mamonjy azy ireo fotsiny isika. Mba hanaovana izany, ao amin'ny tontonana izay misy ny borosintsika dia tsindrio ny zorony ambony havanana, jerena ny safidy hanavotana borosy ary tsindrio eo io. Hisokatra ny varavarankely izay ahafahantsika manome anarana ny fonosinay ary hisafidy ny toerana hitahiry azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fanovana ny borosiko avy amin'ny .TPL ho .ABR ao amin'ny Photoshop
Tena nahasoa ahy io, misaotra !!
Mamaly an'i M